Zinedine Zidane oo si aan horey looga baran kaga hadlay xaaladda Gareth Bale – Gool FM
Zinedine Zidane oo si aan horey looga baran kaga hadlay xaaladda Gareth Bale
(Madrid) 25 Sebt 2019. Zinedine Zidane ayaa ku amaanay xiddiga kooxdiisa Real Madrid ee reer Weles Gareth Bale qaab ciyaareedka uu sameenayo xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa tilmaamay in Bale uu yahay ciyaaryahan weyn, sidoo kalena uu ka mid yahay furuyaasha ay ku ciyaarto Los Blancos xilli ciyaareedkan.
Zidane ayaa ka soo muuqday shirkiisa jaraa’id sida caadiga ah kahor kulanka ay caawa ku soo dhaweyn doonaan kooxda Osasuna garoonka Santiago Bernabeu wuxuuna si weyn u amaanay Bale isagoo yiri:
“Gareth Bale wuxuu isku dayayaa inuu sameeyay qaab ciyaareed cajiib ah, wuxuuna ku gudi jiraa waqtiyadiisii ugu fiicnaa xilligan la joogo”.
“Bale waa xiddig aad muhiim u ah, waana mid kamid ah furayaasha ay ku ciyaarto Real Madrid, wuu ogyahay inuu yahay ciyaaryahan weyn”.
“Bale wuxuu caawiyaa kooxda markuu warartamayo iyo sidoo kale markuu difaactamayo, sidii uu sameeyay kulankii ugu dambeysay, marka ay kooxdu ka go’an tahay wax walba, waan sameyn karnaa waxyaabo waaweyn”.
Waxaa xusid mudan in Gareth Bale uu dhaliyay labo gool ilaa iyo haatan, halka uu sidoo kale caawiyay 2 gool kale, 4-tii kulan uu ilaa iyo haatan uu kaga soo muuqday kooxda Real Madrid horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Sergio Ramos oo ka hadlay mustaqbalkiisa garoonka Santiago Bernabeu
Safafka rasmiga ah oo ay ku soo geli doonaan kooxaha Chelsea, Liverpool iyo Man United kulammada caawa ee tartanka Carabao Cup oo la shaaciyey